Madaxweynaha Puntland oo qaabiley Wafdi ka socda dowladda Somalia [SAWIRRO]
GAROWE, Puntland - Madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa xarunta ka degan yahay Garowe ku qaabiley maanta wafdi ka socda dowladda Federaalka ah ee Somalia.
Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Arriamah Dibadda, Wasiirka Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda, C/llaahi Bidhaan, Wasiiru-dowlaha wasaarada Maaliyadda, Maxamuud Xayir Ibraahim iyo Xildhibaano, ayaa qayb ka ahaa wafdiga gaarey la kulmay Deni.
Ujeedka safarka mas'uuliyiinta ayaa ahaa inay goobjoog ka ahaadaan doorashada Madaxwaynaha iyo ku xigeenka DPL oo maanta qabsoontay, balse aan u suurtagelin kadib markii ay kasoo dib dhaceen.
Wafdigan ayaa maalintii shalay loo diiday inay Garowe kasoo degaan, kadib markii Wasaaradda amniga Xukuumaddii Cabdiwali Gaas ay 31-kii December soo sartey warqad uga mamnuucday Wasiiradda DF iyo Saraakiisha Villa Somalia inay Puntland soo galaan mudada ay doorashadu socoto.
Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa ku guuleystay xilka Madaxwaynaha Puntland, kadib tartan doorasho uu adkaa, balse u dhacay si dimuqraadi ah, oo kaga adkadey 20 musharax oo kale oo uu ku jiray Cabdiweli Gaas.
Sidoo kale, Xildhibaanada Gollaha Wakiiladda ayaa u doortay Axmed Cilmi Cismaan [Karaash], oo horey usoo noqday Wasiirka duulista hawada, Madaxwayne ku xigeenka Puntland.
Isagoo ka hadlayay magaalada Garoowe, Deni ayaa sheegay in Gaas iyo xukuumadiisa...